यस विशाल र व्यापक विषयलाई अलिकति अथवा एकै झमटमा अभिव्यक्त गरेर सकिँदैन। त्यसैले, स–साना प्रसंगहरुबाट जाऊँ। हामी आधी आकाश माग्छौं तर समाजका एकथरी स्वार्थी पुरूष वर्गले हामीलाई आधी इन्च पनि दिन चाहँदैनन्। 'आइमाई केटाकेटी' भनेजस्तै नेपाली सामन्तवादी समाजमा नारी जातिलाई लिएर यति धेरै असभ्य र अपमानजनक उखानहरु छन्, जसले हाम्रो शीर ठाडो गर्न कहिल्यै दिँदैन। आधी आकाश चाहनेहरूले भाषामा, साहित्यमा तथा बोलचालमा पनि यस्ता उखानहरूको वहिष्कार गर्नुपर्छ।
सधैंभरि शोषणको कोलमुनि पेलिएका स्वास्नीमान्छेहरूलाई उनीहरू भन्ने गर्छन्, 'बाख्रा सम्ममा चर्दैन, आइमाई सुखमा बस्दैन।' सुख दिँदै नदिएपछि सुखमा बस्ने कहाँ? यसको अर्थ यसरी लाग्छ। तर, यो उखानलाई पुराणहरु बडो अपमानजनक स्थितिमा प्रयोग गर्छन्। 'बाघको हजार गुँड' र 'खुट्टा भए जुत्ता जति पनि आउँछ', यी उखानहरूमा कति अपमान लुकेको छ। के स्वास्नीमान्छेहरू पुरूषको जुत्ता मात्र हुन्, उनीहरुले जति चाहे पनि फेर्न सकिने? यस्तो उखान प्रायः पाइँदैन, जसमा लोग्नेमान्छेहरुलाई हेय तुल्याइएको होस्। यहाँ म केही यस्ता उखानहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जहाँ पुरूष कतै पनि पर्दैन र उखानहरु स्वास्नीमान्छेहरुलाई लिएर साह्रै असभ्य र विभत्स छन्। 'काम पाएन बुहारी पाडाको...', 'कुन्ताकी बुहारी भटमास खाएकी'... 'ठाउँ न ठहर बूढीको रहर', 'घ्यु न तेल पका बुढी सेल', 'हिस्स बुढी हरिया दाँत', 'चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी', 'रातभरी रुङ्यो बुढी ज्यूँदै', 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनु', 'सौताको रिसले पोईको नाक काट्नु', 'हुँदा जोगी ख्वाई, नहुँदा राँडी रुवाई', 'गरीबलाई दिन्छु नभन्नु, राँडीलाई लान्छु नभन्नू' आदि–आदि। निराश्रित, एकलास भइसकेका बुढी आमैहरुलाई अथवा निराश्रित एक्ली विधवाहरूको यस्तो अपमान किन? महिला मुक्तिका हिमायतीहरुले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।
शनिबार, फाल्गुण २८, २०७३ १५:४८:११